Wafdi Qaramada Midoobay oo booqday Puntland - BBC Somali
Wafdi Qaramada Midoobay oo booqday Puntland
2 Febraayo 2011
Image caption Valleri Amos iyo Cabdiraxman Shiiq Maxammed
Wafdi ay hoggaaminayso ku xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee dhinaca bani-adamnimada iyo gargaarka degdegga ah Valleri Amos ayaa maanta booqasho ku tegay magaalooyinka Garowe iyo Galkacayo.
Wafdiga ay hoggaaminaysay Valleri Amous oo uu ka mid ahaa Mark Bowdan xiriiriyaha hawlaha bani'adamninada ee ay qaramada midoobay ka waddo Soomaaliya iyo masuuliyiin kale wuxu saaka aroortii ka soo degay garoonka dayuuradaha ee magaalada Garowe, wuxuuna isla markiiba kulan la qaatay Madaxwaynaha Puntland Cabdiraxman Sh. Maxamed iyo saraakiil ka tirsan dawladda Puntland.
Kulankaas waxaa lagu lafaguray dhibaatooyinka xagga nolosha la xiriira ee ka taagan xeryaha barakacayaasha ee ku dhaqan magaalooyinka Puntland iyo xaaladda abaaraha ee iyana ka taagan guud ahaan Somaaliya, gaar ahaana degaannada Puntland iyo sidii qaramada midoobay ay kaalin uga qaadan lahayd sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaas.
Waxaa kale oo kulankaas lagu soo qaaday xaaladda guud ee Soomaaliya iyadoo si gaara diiradda loo saaray dhinaca siyaasadda, nabadgelyada, burcad-badeedda iyo qodobbo kale.
Madwaynaha Puntland Cabdiraxman Sh. Maxamed ayaa warbaahinta la hadlay kulankaas ka dib isagoo ka warramay arrimaha ugu muhimsan ee ay ka wada hadeen wafdiga qaramada midoobay.
Madaxweyne Cabdiraxman wuxuu ka mahadceliyay booqashada wafdiga ee ku soo beegantay xaaladda adag oo ka taagan Soomaaliya, wuxuuna sheegay inuu wafdiga kala hadlay duruufaha adag ee ka jira guud ahaan Soomaaliya maadaama booqashada wafdigu ay ku kooban tahay Puntland oo uusan u gudbin gobollada kale ee dalka.
Ku xigeenka xoghaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca bani'adamninada iyo gargaarka degdegga ah Valleri Amous oo iyana weriyayaasha la hadashay ayaa maamulka Puntland uga mahadcelisay waxa ay ugu yeertay shaqo adag oo uu ka wado maaraynta dhibaatooyinka barakacayaasha ku sugan gudaha Puntland.
Valleri Amous waxay kaloo arrimihii lagu soo qaaday kulankii ay iyada iyo wafdigeedu la yeesheen madaxda Puntland. Waxay tiri: waxaan kulankeeni ku lafagurnay dhibaatooyinka ka taagan xeryaha barakacayaasha, gaar ahaan baahiyaha ka jira adeegyada asaasiga ah sida biyaha iyo xagga fayodhowrka xeryahaas. Vallera waxay intaas ku dartay in kulankaasi lagu soo qaaday natiijada abaaraha ka taagan dalka Soomaaliya.
Waxay kaloo tilmaantay in wafdiga qaramada midoobay iyo madaxda Puntland ay si guud uga wada hadleen, caqabadaha ka jira dhinaca nabadgelyada Soomaaliya iyo saamaynta ay taasi u ku yeelatay Puntland.